डिभिजन टु: दोस्रो खेलमा नेपाल पराजित,अबको यात्रा के हुन्छ ? - The First Nepali Digital Newspaper from Australia (Ausnepal news)
डिभिजन टु: दोस्रो खेलमा नेपाल पराजित,अबको यात्रा के हुन्छ ?
काठमाडौं । आईसीसी विश्व क्रिकेट लिग डिभिजन टु अन्तर्गत दोस्रो खेलमा नेपाल पराजित भएको छ । शुक्रवार भएको दोस्रो खेलमा नेपाल ओमनसँग ६ विकेटले पराजित भएको छ । नेपालले दिएको १ सय ३९ रनको सामान्य लक्ष्य ओमानले ३५ ओभर १ बलमा ४ विकेट गुमाएर पूरा गर्‍यो ।
नेपालले खेलमा फर्कन प्रयास गरे पनि असफल भयो । ओमानका लागि खवर अलीले सर्वाधिक ४६ रन बनाए । त्यस्तै भिएस वातेगाउन्करले अविजित ३७ रन बनाए भने जतिन्दर सिंहले २४ रनको योगदान दिए ।
नेपालका सन्दिप लामिछानेले २ तथा सोमपाल कामी र वसन्त रेग्मीले १र१ विकेट लिए । टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको नेपालले खराब प्रदर्शन गर्दै ४६ ओभरमा सबै विकेटको क्षतिम १३८ रन मात्रै बनाउन सकेको थियो । नेपालका कुनै पनि खेलाडीले राम्रो प्रदर्शन गर्न सकेनन् । १० रन हुदा नेपालका उपकप्तान ज्ञानेन्द्र मल्ललाई ७ रनमा गुमाएको नेपालले एकपछि अर्को विकेट गिरेको थियो ।
१४ ओभरको समाप्तिमा ३८ रन हुँदा नेपालले ओपनर दिलिप नाथलाई १९ रनमा गुमाएको थियो । नेपालको ५३ रन हुदा आरिफ शेख आउट भएपछि दबाबमा खेलेको थियो । थप ३ रन जोड्दा अर्थात ५६ रनमा कप्तान पारस खड्कालाई १७ रनमा गुमाएको नेपाल पुरै दबाबमा आएको थियो ।
नेपालका लागि शरद भेषवाकरले २२, दिपेन्द्रसिंह ऐरीले २०, सोमपाल कामीले १७ र रोहित पौडेलले १४ रन जोडेका थिए ।ओमनका लागि कालिमुल्लाहले ४ विकेट लिए । नेपालले अब आइतबार युएईसँग आफ्नो तेस्रो खेलमा प्रतिस्पर्धा गर्नेछ ।